❤️ कसरी इन्स्टाग्राममा कथा थप्ने - Winches क्लब
अहिले सम्म, इन्स्टाग्राम स्टोरी कसरी पोस्ट गर्ने भन्ने बारे सधैं केही भ्रम थियो. यदि तपाइँ केहि समय को लागी तपाइँको पहिलो कथा पोस्ट गर्नुहोस्, तपाईं आफ्नो प्रोफाइल तस्वीरमा + ट्याप गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईं आफ्नो कथामा फोटो वा छोटो भिडियो थप्न सक्नुहुन्छ.
तर एक पटक तपाईंले त्यो गर्नुभयो, + गायब हुन्छ. त्यसोभए तपाई के गर्नुहुन्छ जब तपाई अर्को कथा पोस्ट गर्न चाहानुहुन्छ ?
नयाँ इन्स्टाग्राम अपडेटको लागि धन्यवाद, यो समस्या केही हदसम्म समाधान भएको छ. यो अब एक कथा प्रकाशित गर्न धेरै सजिलो र अधिक सहज छ, र त्यहाँ तीन प्रमुख विधिहरू छन्:
माथि देखाइए अनुसार + चिन्ह छुनुहोस् – नयाँ कथाको लागि मात्र सम्भव छ
आफ्नो पोस्टबाट दायाँ स्वाइप गर्नुहोस्
शीर्ष दायाँमा क्यामेरा प्रतिमा ट्याप गर्नुहोस्.
इन्स्टाग्रामले स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेको छ कि यसको प्रयोगकर्ताहरू, विशेष गरी मानिसहरू जो छैनन् भावुक Instagrammers, ठूलो भ्रम महसुस भयो. यदि तपाइँ प्रत्येक विधिको द्रुत सिंहावलोकन चाहनुहुन्छ भने, तल हाम्रो तीन-भाग गाइड जाँच गर्नुहोस्.
प्रोफाइल तस्वीरबाट इन्स्टाग्राम कथा
यो एक द्रुत कथा पोस्ट गर्न को लागी एक महान छ, तर यसले मात्र काम गर्छ यदि तपाईंले पछिल्लो 24 घण्टामा अघिल्लो कथा पोस्ट गर्नुभएको छैन. तपाईंले आफ्नो फिड वा प्रोफाइल पृष्ठबाट यो विधि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
केवल + प्रतीकको साथ आफ्नो प्रोफाइल तस्वीर ट्याप गर्नुहोस्.
त्यसपछि तपाइँ फोटो वा भिडियो लिन वा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ.
त्यसपछि तल बायाँमा तपाईंको कथामा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंको कथा प्रकाशित हुनेछ.
दायाँ स्वाइप गरेर कथा पोस्ट गर्नुहोस्
यो सधैं एक विशेषता भएको छ, तर यदि तपाईलाई थाहा छैन भने यो अवस्थित छ, उसलाई भेट्टाउन धेरै गाह्रो छ.
यसलाई सिधै आफ्नो फिडमा तान्नुहोस्.
फोटो खिच्नुहोस् वा लाइब्रेरीबाट अपलोड गर्नुहोस्.
तल बायाँ मा आफ्नो कथा मा ट्याप गर्नुहोस् र यो प्रकाशित हुनेछ.
शीर्ष दायाँमा रहेको क्यामेरामा क्लिक गरेर कथा पोस्ट गर्नुहोस्
यो इन्स्टाग्रामबाट एउटा ठूलो नयाँ सुविधा हो र यसको मतलब मानिसहरूले अब धेरै सहज तरिकाले कथा पोस्ट गर्न सक्छन्।. तपाईं आफ्नो पोस्ट बाट यो गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईको पोस्टबाट, केवल शीर्ष बायाँमा क्यामेरा प्रतिमा ट्याप गर्नुहोस्.
प्रयोग गर्नको लागि छवि वा भिडियो छान्नुहोस्.
तपाईंको कथामा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंको कथा प्रकाशित हुनेछ
सूचीमा अन्तिम दुई विधिहरूको फाइदा यो हो कि तपाइँ तिनीहरूलाई तपाइँको कथामा अतिरिक्त फोटो वा भिडियो थप्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले पहिले नै पोस्ट गर्नुभएको छ भने पनि. यदि तपाइँसँग पहिले नै इन्स्टाग्राम लाइभ स्टोरी छ भने पहिलो विधिले काम गर्दैन.
अघिल्लो लेखजब इन्स्टाग्राम मा पोस्ट गर्न को लागी सबैभन्दा राम्रो समय हो ?
अर्को लेख२०२० मा सबै भन्दा राम्रो इन्स्टाग्राम बटहरू के हुन् र तपाईंको खाता कसरी सुरक्षित राख्ने?